5 Firefox Extensions iji Jikwaa Flash ojiji | Site na Linux
5 Firefox mgbakwunye iji jikwaa Flash ojiji
Flash na Linux amịrị. Ma eleghị anya, ugbu a obere obere karịa tupu, ma ọ bụ ka a kama wetara ahụmahụ (ọ na-erepịakwa ọtụtụ ihe onwunwe na-adịghị nwere otu arụmọrụ dị ka na ahụmahụ na Windows).
Ọ dabara nke ọma, HTML5 na-edochi ya n'ọtụtụ akụkụ, mana ọ dị ka anyị ka nwere Flash nwa oge. Maka nke a, anyị na akwado ụfọdụ ndọtị maka Firefox iji nyere gị aka ijikwa ojiji Flash.
NoFlash bụ mgbakwunye Firefox nke na-anọchi ihe ọkpụkpọ YouTube na Vimeo Flash na ibe ndị ọzọ na ibe HTML5.
Flashblock bụ ndọtị (ngwa mgbakwunye) maka Google Chrome na Mozilla Firefox, nke na-enye anyị ohere igbochi ụdị Flash niile.
Site na Flashblock anyị nwere ike igbochi ọdịnaya Flash, ọbụlagodi ime ya na ibe niile, ma ọ bụ rụọ ọrụ naanị ndị anyị chọrọ ịhụ ma ọ bụ kwe ka ọdịnaya niile dabere na ụtọ anyị. Ọ na-enye anyị ohere ịkọwapụta ndepụta ọcha ma ọ bụ ndepụta ndị enyere ohere ebe anyị nwere ike ịkọwa saịtị ebe anyị nwere ike ịhụ Flash. Ihe nlere doro anya maka nke a ga-abụ YouTube, ọ bụ ezie na ọtụtụ peeji ahụ na-arụ ọrụ na HTML5, enwere ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke vidiyo ka na-arụ ọrụ n'okpuru teknụzụ Adobe a. Ya mere, site na Flashblock anyị nwere ike ịkọwa na ibe a "oge niile" na-egosi anyị ọdịnaya Flash, na-enweghị ịkọwapụta ya oge ọ bụla anyị banyere saịtị ahụ.
3. Video DownloadHelper & Ihe nkiri vidiyo Flash
Aha ha na-ekwu ya niile: ịchọrọ ibudata vidiyo site na MySpace, Google Video, DailyMotion, pörkölt, iFilm, DreamHost, Youtube na ọtụtụ ndị ọzọ? Want chọrọ na-akpaghị aka tọghata ha ka ha họọrọ video formats? Jide n'aka na ị nwaa ịgbatị ndọtị abụọ a.
Ọ bụrụ na ị na-eme nchọgharị na weebụ ma chọọ ịgbanwe nha nke ọkụ ọkụ ọ bụla mgbe ahụ FlashResizer, ndọtị maka Firefox, nwere ike ịba uru dị ukwuu.
Site na ahịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke agbakwunyere na ihe ndị dị na ọkụ, ị ga-enwe ike ịme mgbanwe ndị ahụ yana ịlaghachi nha mbụ site na ịpị akara abụọ ahụ.
Ọ dị mma itinye na egwuregwu ọkụ, vidiyo YouTube na saịtị ndị ọzọ yiri ya ebe anyị chọrọ imegharị ọkpụkpọ maka ahụmịhe ka mma.
FlashFirebug bụ ndọtị maka Firefox nke na-enye ndị mmepe ohere ịhapu faịlụ Flash AS3 na web, n'otu ụzọ ahụ dị ka a ga - asị na ha na - etinye faịlụ HTML.
Iji jiri FlashFirebug, ị ga-enwerịrị Firebug arụnyere na Flash Player ọdịnaya debugger 10 ma ọ bụ karịa (dakọtara na ihe nchọgharị Netscape).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » 5 Firefox mgbakwunye iji jikwaa Flash ojiji
Ihe 7 kwuru, hapụ nke gị
Pablo Salvador Moscoso dijo
Dị ka anyị na-ekwu ebe a na Chile, Flash bara uru.
Anọ m na-eji FlashVideoReplacer ruo oge ụfọdụ na ọ bụ ezie na na mbụ ahụmịhe ahụ abịaghị n'oge, ọ bụ ihe iji mee ihe. Igwe gị ga-ekele gị.
Zaghachi Pablo Salvador Moscoso
Ezi onyinye! Daalụ!
Na-eme ihe dijo
Ajula ihe kpatara ya, mana na Debian 60 m, na-eji enweghị nkwụcha akwụ ụgwọ, ihe niile na - arụ ọrụ nke ọma karịa na W7 Ultimate x64 SP1 bido n’otu igwe ahụ.
Debian 6, ndo My pusi screwed elu 😛
Nye bọọlụ ... ihe niile nwere ike ịbụ. : S.
Ka o sina dị, ekwesịrị ịdeba na arụmọrụ ọkụ mere ka ọ dịwanye mma na nsụgharị ndị ọhụrụ maka Linux ... ọ bụ ezie na, n'ezie, ọ ka enweghị.
Hgre (nyefee m) dijo
Ee Ọ bụ ezie na Ubuntu 10.10 (otu igwe ahụ n'ezie), ọ ka bụ ihe na-ama jijiji (flash-abụghị n'efu) ...
Ihe Debian juru m anya.
Zaghachi Hgre (strawregistrarme)
Inukaze Machiavelli dijo
Anyị nwekwara LightSpark (Ọ bụ naanị na m na-ele vidio YouTube na Firefox 5) ọ na-erepịa m obere ihe nchekwa 10 MB, ebe FlashPlayer na-erepịa m opekata mpe 70 MB yana oke ihe nchekwa 384 MB
Zaghachi Inukaze Machiavelli
Gbanwee ọdịdị Gnome na Gnome-Color-Chooser
[Akụkụ nke anọ] LMDE na omimi: Inweta na arụmọrụ